Ciidamada Kenya oo Dad u soo qabtay Afduubkii Haweeneyda Faransiiska (Sawiro) – SBC
Ciidamada Kenya oo Dad u soo qabtay Afduubkii Haweeneyda Faransiiska (Sawiro)
Ciidamada amaanka wadanka Kenya ayaa sheegay inay 7 qof ay ku qabatay Deegaanka uu ka dhacay afduubkii haweeyneyda Faransiiska ee dhawaan la qafaashay waxaana ku socda Baaritaan sida uu hadalka u dhigay Sarkaal sare oo booliiska Kenya u hadlay.
“Macquul mahan in qof inta ka yimaada wadamada deriska uu si toos ah u beegsado guri ka dibna uu qof kala baxo oo qafaasho waxaa jira dad la shaqeynayay oo deegaanka jooga, dadkaasina waan raadineynaa iminka ilaa todoba qof ayaan ka haynaa waxaanse rumeysanahay in ay jiraan dad inta ka badan oo howshan wax ka og,” sidaa waxaa yiri Mathew Iteere.
Sarkaalkan Booliiska ka tirsan waxaa uu ka gaabsaday in uu shaaciyo magacyada dadka la qabtay ee todobada ah iyo sidoo kale dhalashadooda waxaaba uu xusay in su’aalo la weydiin doono la xiriira afduubka deegaanka dalxiiska ka dhacay.
Ciidamada amaanka wadankaKenyaayaa waxaa ay horey u xiray qaar ka mid ah ilaalida goobta uu afdubka ka dhacay waana la weydiinaya su’aalo kala duwan oo la xiriira sida wax u dhaceen iyo sida wax loo afduubtay.
Dowlada Kenya ayaa tuhunsan in afduubkan ay ku lug yeelan karaan xarakada alshabaab oo ka arimisa deegaano u dhow xuduuda Kenya iyo Soomaaliya waxaana sidoo kale Kenya ay baaritaan ku sameyneysaa Dadka Lagu tuhmo inay xiriir la leeyihiin alshabaab.
DAAWO SAWIRADA GOOBTA AFDUUBKA IYO HOWLGALADA CIIDAMADA KENYA